पूर्वी पहाड घुम्दा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पूर्वी पहाड घुम्दा
जेष्ठ ३२, २०७६ लोकराज बराल
झापामा जन्मिएको, बढेको मान्छेलाई मधेस र पहाडको फरक त्यति लाग्दैन । इरौंटार (हालको शान्तिनगर) भौगोलिक बनावट र रहनसहनले पहाड र मधेसको भेदलाई अझ कम गरेको हुन्थ्यो । यो २००७ साल र अझ अघिको समयको कुरा हो । त्यतिखेर हिउँदमा पहाडबाट भारतको आसामतिर काम गर्न जानेको ताँती लाग्थ्यो ।
नेपाली खाडीका कपडा, ढाकरले तराई र पहाडको भिन्नता थाहा हुन्थ्यो । बाटाघाटाको अभाव र कमजोर आर्थिक अवस्थाले उनीहरू धेरै दिन पैदल हिँडी विराटनगर, झापा हुँदै भारतको जोगबनी र नक्सलबाडी, सिलिगुडीबाट रेल चढी आसाम लाग्थे । कोही भने मधेसमै रोजगारी गर्न अडिन्थे ।
भारतका रेल्वे स्टेसनमा यी ढाकरसहित रेल चढ्दा पहाडे लोग भनिएर हेपिन्थे । नेपालको पहिचान भारतको बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेशका बासिन्दाका लागि यिनैबाट झल्किन्थ्यो । हिजोआजको भाषामा उनीहरू मौसमी बसाइँ सर्ने समूहमा पर्थे (सिजनल माइग्रेसन) जो केही महिनापछि त्यही बाटो फर्किन्थे ।
यी मेरा बाल्यकालका स्मृतिका अंश यसपल्ट खोटाङ र परार ओखलढुंगा जाँदा आएका हुन् । त्यस बखतको पहाड र आजको पहाडबीच तुलना गर्ने एक राम्रो मौका मिलेजस्तो लाग्यो । आज नेपालीलाई त्यस दृष्टिले हेपिनुपर्ने वातावरण छैन । न त अब नेपालीहरू ढाकर बोकी कामको खोजीमा पूर्व भारततिर लाग्छन् । यस्तो मौसमी बसाइँ सराइ अब धेरै रोकिएको छ त्यसतिर जान । तर पश्चिम पहाडबाट भने प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्वको समय र कामको खोजीका लागि भने नेपालबाट भारततिर जानेको ताँती कम पाइँदैन । उत्तरपूर्व भारतमा चलेको विदेशीविरुद्धको आतंकले त्यसतर्फको आवत–जावत अब शून्यप्रायः छ ।
नेपाल हेर्ने रहर मेट्न केही बहाना चाहिने रहेछ न त जाने साथी पाउन गाह्रो हुने । परार ओखलढुंगा जाँदा आफ्नै कार्यक्रम थियो । यसपल्ट मेलम्ची, हेलम्बु र दिक्तेलसम्मको भ्रमण भने आफैंले तय गरियो जसमा मन मिल्ने साथीभाइहरू थियौं । ओखलढुंगाको नाउँ कवि सिद्धचरणको ‘मेरो प्यारो ओखलढुंगा’ भन्ने कविताले म दुई–तीन कक्षामा पढ्दाखेरी सुनेको र अब त नारायणगोपालको गीतले यो अझ लोकप्रिय भएको छ । एसएलसीको पाठ्यक्रममा मैले भूगोल कसरी सिक्ने (हाउ टु लर्न जोग्राफी) को लेख पढेकाले त्यसको गहिरो छाप ममा परेको छ ।
हिंड्दा धेरै जनाले यताउति हेरी त्यहाँको प्राकृतिक अवस्था, नदी नाला, गाउँबेंसीको रचना, जनताको बसोबास, विकासको गति, उब्जनी, जंगल आदिको ख्याल गरेको त्यति पाइँदैन । मेरो भने अति उत्सुकताको एक विषय थियो । कसरी सप्तकोशी बनेको छ र कुन कुन नदी कहाँ मिल्छन् र सप्तकोसी भई चतराबाट फैलिन्छ र नेपाल र बिहार हुँदै गंगामा मिल्छ । यो खुलदुली भोटेकोसी, सुनकोसी, इन्द्रावती, तामाकोसी, लिखु, दुधकोसी, अरुण, तमोरको संगम हेर्ने हो । अब सुनकोसी, अरुण र तमोर मिलेको संगम हेर्न बाँकी छ । तर, यी तीन मुख्य कोसीको संगम भने धनकुटाबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
पाँचखालको जिरो प्वाइन्टबाट उत्तर लाग्दा मेलम्ची कसरी इन्द्रावती भयो भन्ने उत्सुकता थियो । मेलम्चीको नाउँ सुनेको २०४६ सालपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीबाट काठमाडौंका सडक धुनेसम्मको पानी ल्याउने भाषण गरेपछि हो । मेलम्ची आजसम्म प्रत्येक सरकारको प्राथमिकतामा परेको योजना भनिए पनि एकपछि अर्को बहानामा यो सम्पन्न भएको छैन । ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ भनेजस्तो भएको छ र नेपालका कुनै नेता र सरकारको भनाइप्रति अब जनता वाक्कब्याक्क भएका छन् ।
विश्वासको संकट जहिले पनि भएकाले कहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले खान पाउलान् भन्न गाह्रो छ । नेपालको विकासका अवरोधका अनेक पक्ष भए पनि भ्रष्टतन्त्र, कुशासन र कार्यक्षमताको अभाव मुख्य देखिन्छन् । मेलम्ची एक अनुसन्धानको राम्रो विषय बन्छ किनभने यतिका सहयोग पाएको जनप्रिय परियोजनाको यस्तो हालतले ठूला र लोकप्रिय नेतादेखि कर्मचारीतन्त्रको भूमिकाप्रति व्यंग्य गर्नुबाहेक अरू के हुन सक्छ ।
मेलम्ची नदी वरिपरि सहरीकरण तीव्र रूपमा भएको र त्यस भेक जोड्ने अनेक बाटा बनेकाले अब सिन्धुपाल्चोकको त्यो पाटो अविकसित भएको भन्न सकिंदैन । मेलम्ची योजना थालेपछि त्यस क्षेत्रको चहलपहलले जनताको आर्थिक कारोबार बढेको, होटल, रिजोर्ट खुलेका र माछापालन आदि व्यवसाय थालिंदा अब नेपालको धेरै भाग अविकसित रहन सक्तैन भन्ने विश्वास जाग्दोरहेछ । यस्ता जिल्लाहरूका विकट क्षेत्रमा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्र सरकारले विकासमा विशेष प्याकेज लगी ती क्षेत्रलाई अरूका दाँजोमा पुर्‍याउनपट्टि लाग्दा राम्रो हुन्छ ।
मेलम्चीबाट माथि हेलम्बु रहेछ । हाम्रो भ्रमणको लक्ष्य हेलम्बु थियो किनभने यसको वर्णन धेरै सुनिएकाले स्वाभाविक रूपमा यसको आकर्षण थियो । हामी बेलुका ५ बजेतिर हेलम्बु पुग्दा भने मैले सोचेजस्तो पाइनँ । यहाँका बासिन्दा धेरै काठमाडौंतिर बस्ता रहेछन् । केही घरहरू देखिएका, पाठशालामा पढ्ने केही विद्यार्थी भेटिएका तर वातावरण भने अति राम्रो । स्कुल धाउने विद्यार्थीलाई भने निकै सकस रहेछ किनभने स्कुल र गाउँको दूरी धेरै पर रहेछ । तर यो स्कुलको वातावरण, भवन आदिले हामीलाई खुसी पार्‍यो ।
नेपाली सेनाले आरक्षण क्षेत्रको संरक्षण गरेकाले हेलम्बु, हरियो, शान्त र स्वच्छ भएको छ । केही उद्यमीले एक चारतारे सरहको होटल बनाएको तर त्यसमा बस्न आउने पाहुना भने अति कम भएकाले यो ठाउँ धेरै ओझेलमा परेको हो कि जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । यसको सुन्दरताको वर्णन धेरैका मुखबाट सुनिएकाले त्यहाँ जाने तारतम्य मिलाइयो । पहिले बाटो नहुँदा मानिस पैदलयात्रा गरी हेलम्बु जाँदा रहेछन् तर अब पैदलयात्रा (ट्रेकिङ) व्यवसाय त्यसतिर अति कम भएछ । मेलम्चीका किनारमा बनेका अनेक प्रकारका होटल, रिजोर्टले यसको महत्त्व घटाएको पनि हुन सक्छ । तर मेलम्ची बिस्तारै एक विकसित क्षेत्रका रूपमा बाहिरका मान्छे लोभ्याउने विविध व्यवसाय र आकर्षण केन्द्र तयार भइरहेको देखिन्छ ।
ओखलढुंगातिर लाग्दा भने अघि भनिएजस्तो खुर्कोटबाट सुनकोसी पूर्व दक्षिणतिर लाग्दा छेउछाउका गाउँबस्ती, हरिया बाली र जनताको जीवनस्तर उठेको देखाउने दृश्यले मलाई अति हर्षित पारेको थियो । ओखलढुंगा पुग्दा साँझ पर्न लागेको र राम्रा होटल पनि नभएकाले जेनतेन हामी दुई रात बस्यौं । ओखलढुंगाबाट सोलु जाने मोटरबाटोमा ठूलाठूला ट्रक–बस हिँड्दा रहेछन् । नेपालमा सडकको ट्र्याक खोल्नेबित्तिकै जस्तोसुकै भए पनि बस र ट्रक चल्न थाल्दा धेरै दुर्घटना भई अनावश्यक रूपमा ज्यान–धनको खती भएको खबर प्रायःजसो आइरहन्छ ।
ओखलढुंगाको एयरपोर्ट रुम्जाटारमा रहेछ । हामी त्यहाँ जान गाडीमा हिंड्दा ज्यान हत्केलामा राख्ने खालको बाटाको अवस्था रहेछ । रुम्जाटार अति रमणीय गाउँ भएकाले यसको बखान निकै सुनिएको हो । कालोपत्रे गरिएको एयरपोर्ट भने सुनसान थियो । अहिले सातामा एक–दुईपल्ट हवाइसेवा थालिएको सुनिएको हो । रुम्जाटारलाई ओखलढुंगासित जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी राम्रो व्यवस्थापन नगरुन्जेल यसको महत्त्व रहँदैन । ओखलढुंगाको बजार पुछारमा कवि सिद्धिचरणको सालिक रहेछ । ओखलढुंगा जन्मथलो भएको र उनको ‘मेरो प्यारो आखलढंगा’ ले यो ठाउँ अरू आकर्षक भएको हो ।
खोटाङ यात्रा भने हलेसी महादेवको आकर्षणले तय भएको हो । मलाई गाउँठाउँ हेर्ने रहर तर केही साथीहरूलाई हलेसी दर्शनले तान्दा कुरा मिली हामी त्यसतर्फ लागेका थियौं । दुई वर्षपहिले ओखलढुंगा जाँदा नदी किनारको सौन्दर्य र नदीको गन्तव्यको उत्सुकता मेटिएकाले घुर्मीपारि खोटाङ जाने बाटो नछुट्टिउन्जेल मलाई नयाँ लागेन । जब बाटो ओरालो लाग्यो र दूधकोसी देखियो म अब फेरि एक भूगोलको विद्यार्थीजस्तो भएँ । यी क्षेत्रबाट मानिस ६०/७० वर्षअघि बसाइँ सरी पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्न आए । म आदर्श विद्यालय विराटनगरमा पढ्दा केही साथी यसै जिल्लातिरबाट आई मोरङ र हालको सुनसरीमा जग्गा किनी बसोबास गर्दै आएका रहेछन् ।
यो उत्तर दक्षिण बसाइँ सराइको थालनीका दिन थिए, सघन भएपछि तराईको जनसंख्यामा पहाडको दबदबा अनुभूत हुन थाल्यो । खोटाङ जिल्ला मलाई सुन्दर र विकासोन्मुख लाग्यो । जयराम घाटको दूधकोसीको पुलले जिल्लाको शोभा मात्र बढाएको छैन, यसले खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, पाँचथर र अन्य जिल्लाका लागि पनि विकासको कडी बनेको छ । हलेसीले नयाँ जीवन पाएको छ किनभने यो रमणीय स्थानमा तीर्थ गर्न आउनेदेखि पर्यटकका रूपमा आई केही समय बिताउने थलोका रूपमा पनि विकास भइरहेछ । यहाँ हिन्दू र बौद्ध धर्मका दुवैथरीका अनुयायी आउँदा रहेछन् ।
यसैले दुवै धर्मका मन्दिर र स्तूपा देखिन्छ । अब मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रको विकास झन् तीव्र होला भन्ने लाग्छ । तर कृषि, पर्यटन र अन्य व्यवसाय विकासको सम्भावना बढाउन सके नेपालका युवा देशभित्रै अल्झी दीर्घकालीन आर्थिक विकासको जग हाल्ने थिए र नेपाल मानिस निर्यात गर्ने देशका रूपमा रहने थिएन । प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ १२:०२
जेष्ठ ५, २०७६ लोकराज बराल
आजसम्म लोकतन्त्रको विकल्प भेटिएको छैन तर लोकतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण लोकतन्त्रान्त्रिक संस्कारमा ह्रास आउनु हो । यो प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै देखिन्छ । यसपालिको भारतीय चुनावी दौडानमा नेताहरूको भाषणको स्तर, निर्वाचन आयोगप्रतिको नकारात्मक जनधारणा र अविश्वासले लोकतन्त्रको सार होइन, आवरण मात्र बाँकी रहेको देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावी प्रचारका क्रममा एउटा प्रान्तिय प्रतिपक्षी दलका ४१ विधायक उनीसित सम्पर्कमा रहेका र चुनावपछि तिनीहरू दल त्यागी उनको दलमा आउने र स्थानीय सरकार अल्पमतमा पर्ने खुलासा गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको टेलिफोनसम्म नलिने पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मोदीलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने भन्दा भारतीय लोकतन्त्रमा कस्तो अभ्यास हुँदै छ भन्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै चुनावी प्रचारका क्रममा प्रतिपक्षका नेता 'चौकीदार चोर हो' भन्छन् । प्रधानमन्त्री ३० वर्ष पहिले आतंकवादी हमलामा मारिएका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई भ्रष्टाचारी नम्बर १ भन्दै गान्धी परिवारप्रति विष बमन गर्छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा राजीव गान्धीलाई दिल्ली उच्च अदालत र संसदीय समितिले सफाइ दिएको बिर्सिन्छन् ।
मरिसकेको राजीवलाई प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय जलसेनाको जहाज परिवारका सदस्य ओसार्न प्रयोग गरेको भन्नसम्म बाँकी राखेनन् । राजीवले व्यक्तिगत कामका लागि नौसैनिक जहाज प्रयोग गरेका थिएनन् भन्ने त्यसबखत नौसेना प्रमुखले सार्वजनिक गरेका थिए ।
जनताका पीरमर्का र विकासका सवालभन्दा पनि एकअर्काबीच भनाभनको राजनीतिले भारत आक्रान्त छ । यसपल्टको चुनावले संवैधानिक संरचना र संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री र कतिपय राज्य सरकारबीच देखिएको कटुताको पराकाष्ठा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मान्दिन भन्नुले प्रस्ट हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा संघीय व्यवस्था कसरी चल्छ ? केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्बन्ध कसरी कायम भई विकास हुन्छ ? प्रधानमन्त्री मोदीले मुख्यमन्त्री बनर्जीको आलोचना गर्दै संविधान नमानेको आरोप लगाए । यदि राहुल गान्धीको 'चौकीदार चोर' भन्ने भनाइ तल्लो स्तरको मान्ने हो भने मोदीले राहुलका बितिसकेका नातेदारलाई तल्लो स्तरको आलोचना मात्र गरेनन्, ७० वर्षको भारतको विकास र अन्वेषणलाई पनि नकारेका राजनीतिक संस्कारको धज्जी उडाएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव प्रचारको स्तर पनि निकै खस्केको थियो । लोकतन्त्र अनुकूलको मर्यादा भुलिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्प डेमोक्य्राटिक पार्टीका भावी उम्मेदवार जोसेफ आर विदेन जेआरलाई उङ्ने (स्लिपी) र अर्का सम्भावित उम्मेदवार बन्री स्यान्डरलाई लग्गु (क्रेजी) भन्ने आरोप लगाउँछन् । हिलारी क्लिन्टनलाई उनले झुट (लायर) भन्दै जेल पठाउने कुरा प्रचारको अंश नै बनाएका थिए ।
लोकतान्त्रिक संस्कारका निम्ति नेताहरूबीच न्यूनतम मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ तर मर्यादित संस्कार स्खलन हुँदै गइरहेको छ । गल्ती सच्याउन सचेतकको भूमिका खेल्नुपर्ने निवार्चन आयोग भारतमा सरकारको लाचार छायाजस्तो देखिएको छ । यसको टिप्पणी स्वयं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एस वाई क्विरेसीले गरेका छन् । आयोगप्रति जनविश्वास डगमगाएको भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंंघन गरेका सबै आरोपबाट मुक्त गरेकामा पनि आयोग विवादमा परेको छ ।
भारतको चुनावमा धार्मिक मुद्दा उठ्ने गरे पनि सन् २०१४ सम्मको चुनावमा धर्मका आधारमा निणर्ायक मतदान भएको थिएन तर यसपल्टको चुनावमा धार्मिक बन्ने होडमा मुख्य दलका नेताहरू लागेकाले धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्ममा प्रहार भएको छ । मोदीको भारतीय जनता पार्टी एकातिर कट्टर हिन्दुत्वको हिमायती देखिने र अर्कोतिर राम जन्मभूमि अयोध्यामा राममन्दिर बनाउन हच्किएको छ । यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन गाह्रो भएको छ ।
उच्च अदालतमा यो मुद्दा अनिर्णित अवस्थामा रहेकाले न्यायालयको बहानामा भाजपा पन्छिएको छ । योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उद्देश्य कट्टर हिन्दुवादी समूहलाई आफूतिर आकषिर्त गरिराख्ने र भ्रष्टाचारमुक्त छवि भएको देखाई चुनावका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने नै मान्न सकिन्छ । यो २०१९ को संसदीय चुनावको रणनीति तयारी थियो । कति कामयावी हुन्छ, मे २३ को नतिजाले देखाउनेछ ।
अब परम्परावादी शैलीको लोकतान्त्रिक अभ्यास असफल हुँदै गएको तथ्य स्थापित लोकतान्त्रिक देशका नयाँ प्रवृत्ति
(ट्रेन्ड) ले देखाउन थालेका छन् । एकातिर लोकतन्त्र देखावटी अर्थात कर्मकाण्डी हुँदै गएको र अर्कातिर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा यस्ता नकारात्मक अभ्यासले प्रभाव पारी देश यथास्थितिमा रहने हुँदा यसको विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएको छ । त्यसैले भारतका सन्दर्भमा माइरन विनरले भनेजस्तो 'अति बढी राजनीति र धेरै थोरै नागरिक पाठ' जस्तो असन्तुलन भए राजनीति झन् बढी अराजक भई खलबलिनेछ । यो रोग आज विश्वव्यापी भए पनि दक्षिण एसियाका देश बढी ग्रस्त छन् ।
नेपालको राजनीति झन् बढी तरल छ, स्थिर भएको छैन । चुनावमा पाएको मतले मात्र स्थिरता आउने होइन । दिनप्रतिदिन स्थापित सरकार र प्रतिपक्षको क्षमतामा अविश्वास बढ्दै जानु अस्थिरतातिर धकेलिएको लक्षण हो । लोकपि्रय नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन भने तथाकथित लोकपि्रयतावाद (पपुलिजम्) ले मात्र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुँदैन । भारतमा मोदीको नेतृत्व र नेपालमा खड्ग ओलीको नेतृत्व यसै दिशामा बढेको देखिन्छ ।
ओलीको लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादले सत्तामा पुर्‍याउन क्षणिक लाभ भए पनि यसले राजनीतिक र विकासको स्थायी बाटो पहिल्याउन सक्दैन । उनको दूरदृष्टि राख्ने क्षमता छैन । यसपल्ट संसद्मा प्रतिपक्षलाई बुँदागत जवाफ दिनुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले ओठे जवाफ र अपहेलनाको भाषा प्रयोग गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कार खस्किएको छ ।
राजनीतिक संस्कार निर्माणमा नेतृत्वको सैद्धान्तिक प्रस्टता र प्रतिबद्धताले भूमिका खेल्छ । जनतालाई विश्वाससाथ आकर्षण गर्ने सांगठनिक र व्यक्तिगत क्षमता अर्को कडी हो । संविधानले स्थापित गरेको भ्रष्टाचारमुक्त प्रभावकारी शासनले मुख्य भूमिका खेल्छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालदेखि संस्थागत रूपमा संस्कार निर्माण गर्न लाग्नुपथ्र्यो । कांग्रेसको परिचय लोकतान्त्रिक अभ्याससितै जोडिएको हो तर बिस्तारै यसको अस्तित्व र आकर्षणमै चुनौती आएको छ । कांग्रेसले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन परम्परावादी सोच र कार्यशैली बदल्नुपर्छ । लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर मात्र हुँदैन । कांग्रेस नेतृत्वको बुताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकारलाई विस्थापित गर्न मुस्किल छ ।
कांग्रेसले आफ्नो संस्कार र संगठन उचो पार्न आफंै सुधि्रनुपर्छ । दोस्रो या तेस्राे पींढीका युवा नेतालाई अघि लगाएर गुमेको साख पुनः हासिल गर्ने रणनीतिमा नलाग्ने हो भने कांग्रेसको अहिलेका शीर्ष नेताहरूले नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्नेछैनन् । ८-१० जना युवा नेतालाई संगठनात्मक भूमिका दिई विश्वासमा लिँदै देशका कुनाकुनामा पुग्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यस्ता युवा नेतामा बोल्ने शैली, खट्न सक्ने क्षमता, सहनशीलता, जनतासित भिज्ने र आफ्ना धारणा राख्न सक्ने गुण हुनुपर्छ ।
राजनीतिक संस्कार निर्माण नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नभई नहुने तत्त्व हो भन्ने कुरामा सबै दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सामाजिक असमानता कसरी घटाउने ? शिक्षा र नयाँ राजनीतिक चेतना कसरी बढाउने भन्ने विषयमा नेतृत्व चिन्तित हुनुपर्छ । संविधानमा जे लेखिए पनि राजनीतिक दल समाज रूपान्तरणमा अग्रसर नभई सामाजिक विभेद अन्त्य हुन सक्दैन ।
पश्चिम नेपालको छाउपडीको अन्त्य गोठ भत्काएर मात्र सम्भव छैन । चेतनाले त्यस्ता विकृतिको गोठ भत्काउन नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्छ । तल्लो भनिएको र उच्च भनिएको जातबीच अन्तरजातीय बिहे हुन सक्ने अवस्था छैन । राज्यको स्वभाव र गराइमा यसको अन्त्य गर्ने अठोट देखिँदैन । कानुन बन्ने तर लागू गर्न नसक्ने नरम राज्य (सफ्ट स्टेट) का लक्षण हुन् । नेपाल पनि अहिले यस्तै अवस्थमा छ । क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रवादीहरू पनि सामन्तवादको अवशेषबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:०४